Real Madrid Laacibkeeda Lucas Vazquez Oo Ka Hadlay Hadii Uu Ku Biirayo Atletico... - Wararka Maanta
Real Madrid xidigeeda Lucas Vazquez ayaa lagu soo waramayaa inuu iska diiday fursad uu ugu biirilahaa kooxda Atletico Madrid marka uu qandaraaskiisa Blancos dhaco xagaaga soo socda.
Ciyaaryahankan reer Spain ayaa qandaraaskiisu dhacayaa bisha soo socota, waxaana la rajeynayaa inuu u dhaqaaqo albaabka looga baxo Bernabeu iyadoo wadahadalada heshiis kordhinta ay miro dhal noqon waayaan.
Real ayaa loo maleynayaa inay dalab hormaris ah u soo bandhigtay Vazquez, laakiin weli mustaqbalkiisa uma uusan dhigin kooxda, waxaana ay u muuqataa inay qarka u saaran yahay inuu joojiyo xiriirkiisa Los Blancos xagaagaan.
Wararka Maanta : Wax waliba oo kaga baahan tahay Falanqeynta kooxaha Atletico...
Sida laga soo xigtay AS , Atletico ayaa soo bandhigtay xiisaha ay u qabaan saxiixa Vazquez, laakiin 29 jirkaan ayaa si edeb leh ku diiday fursadaas sababo la xiriira xiriirkiisa Real.
Warbixinta ayaa intaa ku dareysa in Vazquez laga yaabo inuu isku dayo inuu saxiixo dalab cusub oo Real Madrid ah.
Vazquez ayaa dhaliyay labo gool, waxaana uu dhigay sideed kale 34 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan, laakiin waxa uu haatan ku maqan yahay dhaawac jilibka ah.
Wararka Maanta : Liiska: Arsenal Oo Dooneysa Inay Iska Iibiso 5 Ciyaaryahan Xagaagan
Wararka Maanta : Agaasimaha Isboortiga Ee Paris Saint-Germain Leonardo Oo Ka Hadlay Arinta...
Wararka Maanta : Chelsea oo guul ka gaartay West Ham United soona gashay booska Afaraad ee...
Wararka Maanta : Chelsea iyo Arsenal oo loo gacan galiyay Saxiixa Jerome Boateng
Wararka Videos14 mins ago
Warka Ciyaaraha25 mins ago
Warka Ciyaaraha21 hours ago